UKWENZA IMIGWAQO INGABI EGERMAN
Kulesi sifundo, sizobona imisho engemihle yaseJalimane. Ngakho-ke ngokwesibonelo "Das ist Kind"(lokhu inganekubi "Lokhu akuyona ingane" uzokutshela indlela yokuthola imisho.
Vele, ukuze uqonde lesi sihloko, udinga ukwazi ukuthi ungakha kanjani imisho emihle. Esifundweni sethu sangaphambilini, sichaze indlela yokwenza imisho emihle ngesiJalimane.
Udinga futhi ukwazi isihloko sezindatshana zaseJalimane. Ezifundweni zethu zokuqala, sikhulume ngezihloko zaseJalimane. Kepha uma labo abanenkinga yokukhumbula bebheka ukukhishwa kwama-athikili nezindatshana ezingezinhle ngaphambi kokuqala le ndaba, ngeke babe nobunzima lapha. Ngoba sizosebenzisa ulwazi esilunikeza kuleso sigaba lapha.
Abafundi abafunde izifundo zethu zangaphambilini bayazi ukuthi izinto ezingezinhle zezindatshana ze-ein / eine zingama-kein nama-keine athikili, futhi banezela "cha" okusho umusho. Okungukuthi, ngemisho engemihle, esikhundleni se-ein eine, izindatshana ze- "kein / keine", okuyizinto ezimbi zazo, zizosetshenziswa.
Yilokho i-ein Kind (lo ngumntwana)
Yilokho kein Kind (lokhu akuyona ingane)
Yilokho eine cat (lena ikati)
Yilokho kungekho cat (lokhu akuyona ikati)
Yilokho i-ein Radio (lena umsakazo)
Yilokho kein Radio (akusilo umsakazo)
Futhi singenza imisho engemihle sisebenzisa izinto eziningi. Kepha lapha sizophinda sinake futhi, futhi, ulwazi lwethu oludala luzosihola.
It sizobonisa. Uyazi, amagama ubuningi ahlala esebenzisa abafayo.
Ngakho-ke, i-yapmak keine cak izosetshenziswa njalo ukwenza la magama abe mabi.
Ngakho-ke sithi lapho inqwaba into engalungile,
I-“Keine” iyasetshenziswa, i-kein ayisetshenziswa.
Das sind Kinder (laba yizingane)
I-Das sind keine Kinder (lezi akuzona izingane)
Das sind Hauser (lena yindlu)
Dus sind keine Hauser (lezi azikho ekhaya)
Das sind Katzen (lawa amakati)
Das sind Keine Katzen (akuzona amakati)
Ungazijwayela ngokuphinda uphendule amasampuli.
Ungabhala noma yikuphi imibuzo noma ukuphawula mayelana nezifundo zethu zaseJalimane ukuya emaqenjini angama-German noma imibono engezansi. Yonke imibuzo yakho izophendulwa ngabafundisi baseGermany.
UKUKHULUZA KU-RISALE-İ NURImali yokuphila ayikho. Imisebenzi edingekayo iningi.
YINI I-EHEMMİYETLİ YAMAMAZIN? KUFUNDAYINI ISIHLOKO ESIKHULU SOMUNTU? KUFUNDAIZIFUNDO ZETHU ZIFUNDA KONKE UNKULUNKULU? KUFUNDANjengoba kuchaziwe kuMhlahlandlela Wentsha, ngokuqinisekile intsha ngeke ihambe. Ngisho noma ihlobo linikeza indawo ebusika nobusika futhi sishintshe usuku nosuku nobusuku, ngisho nentsha izoshintsha ekugugeni nasekufeni. Uma intsha nentsha yesikhashana eqondisa ubumsulwa ngenxa yokukhathalela, uyomnqoba intsha engapheli, intsha eyodwa yonke i-etiquettes ye-Semâvî inikeza izindaba ezinhle.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe unyaka ongu-1 edlule, ngoSepthemba 26, 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoDisemba 14, 2020.
Okuqukethwe kwe-German Tens nokuThunyelwa kokuThunyelwa
Izigatshana zesiJalimane Zenqwaba, Inqwaba yezigwebo zaseJalimane
Tags: Imisho ye-10 yesiJalimane emibi, 10. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. imisho yesiJalimane emibi, imisho emibi yaseJerman, Imisho yesigwebo esichazayo se-German engezansi